Inter Milan oo talaabo u jirta inay heshiis la gaarto xidig ka tirsan kooxda Manchester City – Gool FM
(Yurub) 20 Abriil 2019. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Talyaaniga, Inter Milan ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato daafaca reer Brazil iyo kooxda Manchester City Danilo suuqa xagaaga ee soo socda.
Shabakadaha “Sky Sports” iyo “La Gazzetta dello Sport” ayaa waxay sheegeen in Nerazzurri ay wadahadal la furtay wakiillada laacibkii hore ee kooxda Real Madrid.
27 jirkan ayaa ku yimid kooxda Manchester City sanadii 2017 aduun lacageed dhan 30 milyan oo euros ah.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo, labada kooxood ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan 20 ilaa 22 milyan euro si ay u fududeeyaan wada hadalada u dhexeeya ee ku aadan saxiixa xidiga reer Brazil ee Danilo, kaasoo weli qandaraaskiisa uu ka harsan yahay saddex sano ee kale.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ayaa sheegay in Danilo uu soo dhaweeyay heshiis 4 sano ah uu kula joogi doono kooxda Inter Milan, kaasoo xili ciyaareedkii uu ku qaadan doono mushaar gaarsiisan 4 milyan oo euros.
Yeelkadeeda, Danilo ayaa door weyn ee muuqda ku lahayn qorshaha tababare Pep Guardiola tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Real Madrid sanadii 2017-kii.